Mashandisiro ekushandisa kuongororwa kwevatengi kuti uwane zvimwe zvekutengesa muCommerce? | ECommerce nhau
Unogona kusazviziva, asi vatengi vako vanogona kuve vabatsiri vakanakisa veiyo kushambadzira kwezvako zvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa. Kuburikidza nezano, yakapusa senge inoshanda sekushandisa maonero evatengi mune zviito izvi zvine hungwaru uye pamusoro penzira dzese dzakaringana kubva zvino zvichienda mberi. Uye kubva kwaunogona kubatsirwa kana iwe ukagadzira nenzira kwayo kuchitoro chako chepamhepo kana kutengesa. Iwe unoda kuziva nenzira ipi?
Ehezve, kuti uzive mashandisiro evatengi maonero ekugadzira zvimwe zvekutengesa muCommerce iwe unofanirwa kufunga nezve mamwe mativi akabatana zvakanyanya nekushambadzira kwazvino. Iko kwakakosha kwazvo kuti iwe utarise kubva zvino zvichienda mberi kuti maonero evatengi anouya zvakananga kubva kune vatengi vanotaura maonero avo vachizvidira. Izvo zvaunogona kubatsirwa uchifarira izvo zvido zvehunyanzvi chiitiko chako.
Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti 70% yevaSpanish vanobvuma kuti vanoshandisa iyo Internet kubvunza maonero evamwe vatengi nezve zvigadzirwa kana makambani, maererano neongororo ichangobva kuitwa inoitwa naOpinea. Kusvikira iyo inoratidza kuti iwe unogona kuve iri rakanakisa zano kana iwe ukashandisa yakanaka mukurumbira online kukudziridza kutengesa kwako uye chiyero chako chekushandura nekuda kwemafungiro evatengi vako. Kunyanya kana izvi zviri zvakanakisa zvaunazvo mune yako portfolio izvozvi.
1 Kuongorora kwevatengi: kupa kuoneka kune zvigadzirwa zvako
2 Wedzera zvigadzirwa kana masevhisi
3 Sechishandiso chekuchengetedza vatengi
4 Simbisa maonero evatengi vako akakodzera
5 Simudzira pfungwa dzeava vanokosha vashandisi
6 Shandisa makuru ekutsvaga injini paInternet
Kuongorora kwevatengi: kupa kuoneka kune zvigadzirwa zvako
Usazeze mupfungwa yekuti maonero evatengi anowedzera kuoneka kwezvigadzirwa zvako, zvinobatsira mukugadzira runyararo rwendo rwevatengi, zvinokutendera kuti uzive zvinodiwa nevatengi vako uye kugadzira zvimwe kutengesa. Ivo vanogona kuve vari mumiririri akanakisa aunofanirwa kuzadzisa chinangwa chekuwedzera huwandu hwevashandisi mubhizinesi redhijitari. Mazano mashoma anoshanda seiri ekuvandudza chinzvimbo chekambani yako zvishoma nezvishoma uye nenzira inoshanda kwazvo.
Nepo kune rumwe rutivi, iwe haugone kukanganwa kuti chimbo chakasimba kwazvo kugadzira mamiriro akasarudzika. Sezvazviri mune zvekuti maonero asina kunaka anogona kudzokororwa kuti avatungamirire pakuva pakupedzisira pakuita sekuverenga kwakanaka. Hazvishamisi kuti kune njodzi yekuti dzimwe nguva kana maonero ese akanaka anogona kutungamira kune vatengi kana vashandisi vachifunga kuti ndezvekunyepa. Icho chiito icho kune imwe nhanho chingave chinonzwisisika nekuda kwekusimudzira kwakasiyana uye nemaonero evanhu ava.
Wedzera zvigadzirwa kana masevhisi
Ehezve, ichi ndicho chakanyanya kukosha chinangwa mukirasi ino yezvekutengesa nzira dzekuti ungashandise sei pfungwa dzevatengi ku gadzira zvimwe kutengesa muCommerce. Izvi zvinodaro nekuti mafungiro evashandisi aya anogona kukanganisa sarudzo dzakaitwa nevamwe. Kunyanya kana vaine mukurumbira wakanaka nevamwe vatengi uye vanogona kutomisikidza maitiro mune yevatengi chikamu. Izvi zvakaitika mumakore achangopfuura kuburikidza nevanokurudzira vanogona kuve chimwe chezvinhu zvinoshuviwa zvakanyanya pazvitoro zvepamhepo kana zvemagetsi kana mabhizinesi.
Iyi inogona kuve imwe yenzira dzakanakisa dzekutengesa dzinogona kuchinjika kubva zvino zvichienda nekuti ine yakaderera kwazvo kana zero zero mutengo wekushandisa. Kusvika padanho rekudzikisira bhajeti iyo makambani achange aine iyi pfungwa. Nechishandiso chiri nyore kwazvo nekuti zvinongoda vashandisi vane nzira yedu yekugadzirisa kambani. Saka kuti nenzira iyi, ivo vanove vasinga-vanowirirana vabatsiri kune iri dhipatimendi revanhu. Pakupera kwezuva, zvinangwa zvatinoshuvira zvikuru zvichasangana uye izvo hazvisi zvimwe kunze kwekutora vatengi kupfuura izvozvi.
Sechishandiso chekuchengetedza vatengi
Kuvaka kuvimbika kwevatengi kunodhura kakawanda pasi pekutora imwe nyowani, sezvakaratidzwa nemamwe maindasitiri anoshuma panguva ino. Kupa vashandisi veInternet mukana wekubvunza maonero evamwe vatengi nevatengi vako kuti vagovane ruzivo rwavo rwekutenga. Ndokureva, zvinoratidzwa kuti pakupera kwezuva zvinonakidza, sezvo zvichifanira kuve mune chero zvezviitiko zvakatarwa.
Nenzira iyi, iwe unozogona kutsvaga izvo zvavanonyanya kukoshesa nezve chiitiko uye nekuronga mhinduro kana paine kushoropodzwa. Pakupera kwezuva iri yekutanga uye nzira itsva yekuve mutungamiri, zvese maererano nehunhu hwebasa uyezve nehukama hwevatengi! Uye ichi chinhu chinogona kubatsira zvakanyanya makambani edhijitari kuti awedzere nenzira yakaenzana uye inoshanda. Sezvo mashoma mazano anogona kuitwa panguva ino uye nenzira inoshanda kwazvo muzvinangwa zvinofanirwa kuzadzikiswa.
Simbisa maonero evatengi vako akakodzera
Mukati meichi chirevo chizere, zvakakosha kuti uzive kuti mawebhusaiti anosanganisira akasimbiswa makomendi uye maonero anonyoresa yakanyanya kukwirisa chiyero chekushandura pane izvo zvisingaiti. Naizvozvo, usazeze chero nguva kuisa zviyero zvazvino, pamwe nenyeredzi uye neavhareji mucherechedzo wechitoro chako pane peji rekumba uye mumatanho akasiyana etanho rekutengesa.
Aya maonero anotendera iwe kuti uwane kuvimba kwavo panguva yesarudzo kuitira kuti vasimbise kutengeserana uye vasvike padanho rekupedzisira: muripo. Asi pamusoro pezvo, ichaburitsa imwe nhevedzano yemitambo iwe yaunogona kutora mukana wayo mukusimba kukuru kubva zvino zvichienda mberi. Semuenzaniso, iwo atinozofumura pazasi:
Gadzira kuvimba kwakanyanya pakati pevashandisi kana vatengi, asi zvakasiyana nedzimwe nzira dzekutengesa nekuvimbika kukuru. Kusvika padanho rekuti vanogona kuita kuti vanhu vakakosha ava vawedzere kuvimbika.
Icho chishandiso chinogona kushandiswa zvakakwana kutengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu. Nenzira inofambira mberi uye kubva kune yako pachako kuratidzira kune chikamu chevashandisi kana vatengi. Kusvika pakuti iyo inzira isingatombokundikana.
Iyo inobvumira iyo mufananidzo weiyo yekutengesa mhando kuti iitwe inoonekwa nenzira yechisikigo, uye mune iyi kesi zvakare inoshanda. Iwe haugone kukanganwa kuti izano rekushambadzira iwo mabhizinesi mitsara iwe yawakabatanidza mukambani yako yedhijitari.
Uye pakupedzisira, inova chombo chine simba kutarisana nemakwikwi. Mune mamwe mazwi, inozvitsauranisa kubva kuzviito zvinoitwa nemamwe makambani ane maitiro akafanana. Ine chisimbiso chayo icho chinovakirwa pane zvinogara zvichishandiswa nevatengi maonero ekugadzira zvimwe kutengesa mu eCommerce.
Simudzira pfungwa dzeava vanokosha vashandisi
Chero zvazvingaitika, haugone kukanganwa kubva zvino zvichienda mberi kuti iyi nzira yekutengesa inzira huru yekusimudzira iyi mhando yekuita mukushambadzira kwedigital. Mupfungwa iyi, zvakakosha kwazvo kuratidza chokwadi chekuti chikuru chinokurudzira kufarira muchiratidzo, kuchiteverwa nemukana wekutora chikamu mumakwikwi, kusvika pakuziva zita racho zvirinani kana kudzvanya pakushambadzira. Izvo, shure kwezvose, chinhu chitsva chinokurudzira iwe chaunogona kukurudzira kukudziridza aya maonero kune chikamu chevatengi kana vashandisi.
Nezve iyi poindi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune akasiyana masystem anogona kushandiswa kugutsa izvi zvakakosha zvido. Saka kuti nenzira iyi, maonero evanhu ava anowedzerwa. Semuenzaniso, pachishandiswa chiito chakareruka kuita sekuwedzera tebhu panotariswa maonero aya mune makuru masocial network. Pa Twitter, Facebook, Instagram, Iwe Tube kana vamwe vane zvakafanana maitiro.
Shandisa makuru ekutsvaga injini paInternet
Kana uchitsanangura marongero ekuziva kuti maonero evatengi angashandiswa sei kugadzira zvimwe zvekutengesa muCommerce, kushandiswa kweinjini huru dzekutsvaga dzeInternet hakugone kusipo. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa chokwadi chekuti kana ukashandisa idzi nzira dzekutaurirana uchawana tsananguro iri nani uye yakagadziridzwa yewebhusaiti yako mumhedzisiro yekutsvaga, mikana yekuti vashandisi veInternet vanowana webhusaiti yako ichave yakakura.
Pane ichi chinhu, pfungwa dzevamwe vanhu dzinogona kukanganisa kuitira kuti vamwe vatendeudzire kufarira kwavo zvigadzirwa kana masevhisi atinotengesa uyezve kukwanisa kuratidza huzivi hwemuviri wedu webhizinesi. Iko kushoropodzwa kwevanhu ava kubva zvino zvichienda mberi kuri kushanda chaizvo. Nekuti zvirokwazvo, hazvigone kurambwa kuti kushoropodzwa hazvireve kuti kwakashata kune bhizinesi. Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuvatonga uye kunyanya kuamisa iwo kuitira kuti pakupedzisira mhedzisiro mhedzisiro ive yakanaka kwazvo kuchitoro kana kutengeserana kwedhijitari.
Kubva pane ino maonero, ichi chiito chinogona kubatsira zvakanyanya kuzadzisa zvinangwa zvechimbichimbi. Kuitarisa pane yakanaka modhi yekugadzirisa mhinduro dzemushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Mashandisiro ekushandisa kuongororwa kwevatengi kuti uwane zvimwe zvekutengesa muCommerce?